I-anthropocentrism: izici, imvelaphi nokubaluleka | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Namuhla sizokhuluma ngohlobo lwemfundiso eqinisekisa isikhundla esiphakathi komuntu emhlabeni. Imayelana ne- anthropocentrism. Kulesi sikhathi samanje sokucabanga sithola ukuthi umuntu unesibopho futhi uphakathi kwazo zonke izinto. Uma sihlaziya ukubaluleka kusukela ekubukeni kwe-anthropocentrism sibona ukuthi kuphela zonke izintshisekelo zabantu okufanele zithole ukunakekelwa kokuziphatha. Luhlobo oluhlukile lokuhlukile kwe-theocentrism eyayinamandla ayo eNkathini Ephakathi.
Kulesi sihloko sizokutshela konke odinga ukukwazi mayelana ne-anthropocentrism nezici zayo.
2 I-anthropocentrism kanye nengqondo iyashintsha
2.1 Ukuzalwa kabusha
3 Izici Eziyisisekelo ze-Anthropocentrism
I-Theocentrism kwakuyimfundiso yangaphambilini lapho uNkulunkulu ebhekwa njengomuntu wendawo yonke futhi eqondisa konke, kufaka phakathi imisebenzi yabantu. Njengoba lobu buthakathaka bobuNkulunkulu babulahlekelwa ukubaluleka emlandweni ngokuhamba kwesikhathi, wonke umthwalo wanikwa umuntu. Ngale ndlela, izintshisakalo zabantu kuphela ezithola ukunakekelwa kokuziphatha futhi ngaphezu kwazo zonke izindaba ezibalulekile. Ukudlula kusuka ku-theocentrism kuya ku-anthropocentrism kwakusho ukuthi yonke imithwalo yemfanelo onkulunkulu ababenayo nokubaluleka kwabo iyoba ngumuntu. Lokhu kubangele ukuguqulwa okukhulu emikhakheni yezobuciko nobuciko.
Siyazi ukuthi kwavela ekuqaleni kweNkathi Yesimanje ngokunembile ekudluliseni phakathi kweMinyaka Ephakathi Ephakathi neNkathi Yesimanje. Ngaleso sikhathi cishe yonke impucuko yayivele ivele yavela emkhakheni wokuziphatha, wokuziphatha, wokwahlulela nowefilosofi. Lokhu kubenza babe nokukhathazeka okuthile ukwazi ukuthi ngubani obhekele indawo yonke. Uma sisanikeza ulwazi lwamanye amafilosofi empucuko yasendulo sithola uphenyo oluthile lwesayensi oluzama ukuthola ukuthi uyini umsuka womuntu. Lokhu kuphenywa kwaholela umphakathi wangaleso sikhathi ukuthi ubuze ukungabi nalwazi. Ngamanye amagama, lapho kubhekwa umsuka womuntu, intshisekelo yalahleka nokuthi iqiniso lokuthi onkulunkulu babeyisikhungo sendawo yonke kwabuzwa.
I-anthropocentrism kanye nengqondo iyashintsha
Umphumela wokushintshwa kwemfundiso kwaba umqondo omusha omusha. Lapha kufakwe uhlelo lwengqondo olwalunomuntu ophikisana naye njengomuntu ophakeme naphakathi nendawo yonke. Lolu hlobo lwemfundiso lubheka ukuthi leso sizathu kufanele kube ukuphela komhlahlandlela wabantu ukuze bathuthuke futhi bathuthuke. Basuka ekubeni nokholo njengenjini yemfundiso baye ekucabangeni. Kufanele kukhunjulwe ukuthi lonke lolu shintsho emqondweni lwadala ukuguquka kwazo zonke izinkolelo ngaleso sikhathi.
Imfundiso ye-anthropocentrism yayisekelwe umuntu ungumuntu ozimele kuzo zonke izinganekwane nezindaba zezenkolo. Zonke lezi zindaba kuze kube yileso sikhathi zazibandakanya umuntu futhi ziphoqa umphakathi ukuthi wenze izinto ezithile noma ugcine izindlela ezithile zokuziphatha.
Sizofingqa ukuthi yimiphi iminyakazo eyinhloko eyayiyisisekelo sokushintsha kwesimo sengqondo ngenxa yokwethulwa kwe-anthropocentrism.
Kuyinhlangano yobuciko eyavela ngekhulu le-XNUMX futhi yavela enyakatho ye-Italy. Le nhlangano yobuciko ingamelwa futhi ivezwe ngokudweba, ukubaza nokwakha. Igama lokuvuselelwa livela eqinisweni lokuthi kulesi sitayela ezinye izici zesiko lesi-classical nesamaRoma zisetshenzisiwe. Njengoba kunikezwe ukuthi i-anthropocentrism ikwazile ukubusa yonke le nkathi, abaculi abaningi basebenzise ithuba lokuhumusha izethulo zabo zibe yimisebenzi. Ngokwesibonelo, kwakukhona izethulo eziningi zomzimba womuntu ezazenziwe ngobuciko obudala bamaGrikhi namaRoma. Kwakuneminye futhi imisinga yobuciko eyasebenzela ukubuyisa amanye amasu wokuzwana nokulingana okwalahleka ngokuhamba kwesikhathi.
I-Anthropocentrism yabangela ukuvuselelwa kwasakazeka kulo lonke elaseYurophu futhi kwaqhubeka kusebenza kuze kube sekhulwini le-XNUMX.
Kungokunye ukunyakaza kobuhlakani lapho i-anthropocentrism yayifingqwa khona. Ingavela e-Italy ngekhulu leshumi nane futhi ivezwe ezifundisweni ezahlukahlukene ezinjenge kwakuyifilosofi, izincwadi kanye nemfundiso yenkolo. Ifilosofi ayeyibeke ku-anthropocentrism yeza ukuthola isiko lakudala lamaGrikhi namaRoma. Lezi zinkambiso zakudala zibeka nokuthi umuntu uyinto nesikhungo sokufunda futhi unesibopho sokuba yisikhungo sendawo yonke.
Sonke lesi sikhathi lapho kwakudlange khona ubuntu, kwenziwa izinguqulo ezahlukahlukene nokusatshalaliswa kweminye imisebenzi yamaGrikhi namaRoma. Le misebenzi izohlala ifihliwe ngenxa yokuba khona kwe-theocentrism phakathi neNkathi Ephakathi. Kumele kuqashelwe ukuthi, yize umuntu wayebhekwa njengesikhungo sendawo yonke futhi enesibopho sezinto zonke, inkolo ayizange ishiywe ngokuphelele. I-Humanism yasakazeka kulo lonke elaseYurophu futhi yafinyelela isiqongo sayo esiphakathi kwekhulu le-XNUMX nele-XNUMX.
Izici Eziyisisekelo ze-Anthropocentrism
Sizohlaziya ukuthi yiziphi izici ezisemqoka ze-anthropocentrism njengemfundiso. Khumbula ukuthi isici esiyinhloko yilokho isidalwa esingumuntu hhayi uNkulunkulu sisenkabeni yomcabango. Ngenxa yalokhu, bazalwa kuyo yonke imicabango nemisinga ebisakazeka emphakathini wangaleso sikhathi.
Ngenxa yezimpawu zale mfundiso sithola ukuzethemba okugcwele kumuntu. Kwakwethenjwa ngokuphelele kuyo yonke into eyayiyindalo yomuntu nasekhonweni lalokhu ukuze kukwazi ukubusa imvelo. Inkazimulo nodumo lomuntu ngonyaka umgomo wawo wonke umuntu. Izindinganiso eziphakeme zanikwa udumo, udumo, amandla noma udumo. Bafike eqophelweni lapho babethathwa njengezifiso ezazizulazula kumuntu. Lokho wukuthi, abantu ababengenadumo noma amandla babengenaxabiso.
Konke lokhu kwavuselela ithemba. Noma kwakukhona ukukhathazeka okukhulu ngempilo yasemhlabeni, umqondo wokuthi umuntu ubephila ukujabulela lapha futhi manje usunqobile. Lokhu kwaziwa njenge i-carpe diem. Futhi bekusho ukuthi umhlaba uyeke ukuba yindawo yokuhamba futhi waba yindawo ekhonze ukujatshulelwa ngokuphelele.
Ngiyethemba ukuthi ngalolu lwazi ungafunda kabanzi nge-anthropocentrism nezimpawu zayo.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » Ukwahlukanisa » I-Anthropocentrism